तपाईको हत्केलामा पनि 'X' को चिन्ह छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ यसको रहस्य!
मानिसको भाग्य र भविष्य अनुहार या हस्तरेखा हेरेकै आधारमा गर्ने गरिन्छ। ज्योतिषीय आधारमा पनि हस्तारेखाको आधारमा भाग्य हेर्ने चलन रहेको छ। जुन रेखा हेरेकै भरमा ज्योतिषले हरेक मानिसको भबिश्य बताउने गर्छन। मान्यता अनुसार महिलाको देब्रे र पुरुषहरुको मामलामा दाहिने हातको हस्तरेखा हेर्ने गरिन्छ। हरेक मानिसको हत्केलामा फरक फरक प्रकारका रेखाहरु हुने गर्छन त्यसै क्रममा आज हामी यस्तो रेखाको बारेमा कुरा गर्न जादैछौं जुन प्राय कम मानिसको हतमा हुने गर्दछ।
आखिरमा हस्तरेखा के हो त ?
वास्तवमा हस्तरेखा के हो भन्ने बिषयलाई आज भन्दा करिब हजार बर्ष पहिले हिन्दु ऋषि बाल्मीकिले ५६७ छन्द युक्त ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन। हस्तरेखाले प्राचिन ज्ञानका आधारमा मानिसको व्यक्तित्व र भविष्यको सम्भावना जस्तै करियर , जीवन , धन , बिद्या , जागिर , धन , स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी कुराहरुको बारेमा बताउछ।
हत्केलामा ‘X’ चिन्ह हुनुको रहस्य
हत्केलामा ‘X’ चिन्ह प्राय दुर्लभ नै हुने गर्छ। यो संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने गर्छ। हालै मात्र मास्को युनिभर्सिटीमा हत्केलामा ‘X’ चिन्ह हुने मानिसको भाग्यको बारे एक अध्ययन समेत गरिएको थियो। जुन अनुसन्धान बाट हत्केलामा यस्ता रेखा हुनेहरु भविष्यमा ठुलो नेता हुने , अन्य कुनै प्रतिष्ठित कामका लागि लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध हुने सम्भावना गर्छ।
जुन व्यक्तिको दुवै हातमा यस्तो रेखा हुन्छ उनीहरुले कुनै ठूलो काम गरेर प्रसिद्धि कमाउने तथा मरेपछि पनिअविस्मरणिय हुने गर्छन्। जुन व्यक्तिको एउटा हत्केलामा मात्र यस्तो चिन्ह हुन्छ उनीहरु प्रतिष्ठित हुने र सफलताले उनीहरुको कदम कदममा चुम्ने बताइन्छ।
प्रकाशित : शनिबार, चैत १६, २०७५१५:२०
यी ५ पाँच लक्षण भएका महिला अत्याधिक भाग्यशाली हुन्छन् ! तपाईको प्रेमिका, श्रीमतीमा पो छ की ?